5 Qodob oo Kaa Caawinaya Inaad Habeenkii Hesho Hurdo Fiican | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waxaa tan iyo intii xayiraadaha ah in guriyaha aan laga bixi Karin ee cudurka Corone la soo rogay soo badanaysay cabashooyiinka ku aadan hurda la’aanta. Waxaa aad baraha bulshada loogu baahiyay hashtag lagu magacaabo”can’t sleep” ama ma hurdi karo, taasi oo muujinaysa dadka badan ee ay hurda la’aanta ku dhacday.
Mid ka mid ah dadkaasi waa Coppell.
“Ka hor inta aan xayiraadda la soo rogin waxaan u hurdi jiray si aad ah, balse imika waxaa i haysata taa badalkeeda oo hurda la’aan ah,” waxay Laura oo 26 jir ah sidaasi u sheegay BBC qeybta Newsbeat.
Haddii arrintan oo kale ay ku haysato , hadaba qaabkan ayaad dib u habayn ugu samayn kartaa hurdadadaada
1. Jadwalka noolasha
Laura ayaa sheegtay in jadwalkeedii maalinlaha ahaa uu imika daaqada ka baxay. “Caadiyan subaxii hore ayaan soo kici jiray, waxaan aadi jiray goobta jimicsiga ee Jiimka, shaqada ayaan aadi jiray ka dib mar kale Jiimka markaas ka dib ayaan seexan jiray ,” ayay tiri Laura. Balse markii shaqadii laga fasaxay islamarkana aysan shaqeynayn,balse mushaarkeedi ay wali qaadato waxaa wax badan iska badalay qaabkii ay u nooleyd.
In qofka uu jadwal samaysto oo noolashiisa ay noqoto mid jadwaleysan ayaa ah qodobka ugu muhimsan ee uu qofka uu hurdo wanaagsan ku heli karo, sida uu sheegay Kevin Morgan. Waa dhaqtar ku taqasusay cilmo-nafsiga oo wax ka dhiga jaamacadda Loughborough islamarkana waxaa uu daraasad uu sanooyiin bada ku samaynayay hurdada.
Iyada oo xayiraadda ah in guriyaha aan laga bixi Karin ay wax ka badashay habkii joogtada ahaa ee aan u nooleyn, ayuu Kevin sheegay in aysan ahayn wax lala yaabo in dadka ay adag tahay inay la qabsadaan.
“Jadwalka waa waxa haga hurdada wanaagsan, waxay difaacaysaa hurdadeena,” ayuu yiri.
Waxaa uu Kevin ku talinayaa in xitaa haddii hab noolaleedka qofka uu muddooyiinkan wax iska badalay in loo baahan yahay in qofka uu daa’imo qaabkii hore iyo waqtiyadii uu hurdi jiray si uu u helo hurdo wanaagsan. “Soo kac xilligii aad soo kici jirtay islamarkana seexo waqtigii aad seexan jirtay.” Ayuu intaa ku daray Kevin Morgan.
Balse hurdada yar ee indha gaduudsiga ah ee qaar ka mid ah dadka ay seexdaan ayaan ahayn war wanaagsan . “Waa in aad keydsataa hurdadaada, waa kheyraad qiimo badan mana aha kheyraadkasi inaad ku lumiso in yar oo aad maalinkii huruday.”
2. Iftiinka maalinta
Ma aadi karno dibadda sidii aan horey sameyn jirnay taasi oo aan war wanaagsan u ahayn hurdadeedna sababto ah iftiinkii maalinkii ayaa ah mid faa’ido ku ijirto. Indhaheena ayaa waxay u baahan yihiin in ay arkaan iftiinka sababtoo ah hoormoon ku jira jirkeenka oo lagu magacaabo melatonin – kaasi oo jaangooya hurdadeena iyo waqtiga aan soo kaceyno.
“Waa qaabka kali ah ee uu jirka ku ogaan karo inuu mugdi jiro ama iftiin.”ayuu yiri Kevin. Haddii markaasi uusan qofka ka bixi karin guriga oo u guriga joogo , waxay micnaheedu tahay in uu meesha ka baxay iftiinkii naga caawinayay heerka jaangoynta huradadeena.
3. ‘Dib u dhigo wal-walkaaga
Waa wax iska caadi ah in waqtigan oo kale wal-walka iyo fikarka uu iska bato. Laura ayaa sheegtay in heerka walaaca iyo wal-walkeeda uu sare u kacay intii la soo rogay xannibaadaha ah in guriga aan laga bixi Karin . “Waxaa jira hubanti la;’aan badan – xaaladan oo kale wali nama soo marin,… xaaladda caadi ma ku soo laaban doontaa? Waa xaaladaas aan la ogeyn waxay noqonayso waxa walwalka ii keenaya.
Kevin ayaa yiri “dhammaanteen walaac ayaa na haya taaso oo ku saabsan qoyskeena, ama caafimaadkeena amaba shaqooyiinkeena. Balse inkastoo uu caadi yahay walwalka, Prof Kevin ayaa ku talinaya in walwalka iyo fakarka aan sariirta lala tagin. “U sheeg naftaada waxaad sameysay wax waliba oo aad sameyn kartay maalinkaa mana jiro wax kale oo aad sameyn karto, ka dib wixii howl ah u dhigo maalinka xigta markaad hurdo fiican heshid habeenkaas .” ayuu yiri.
4. Ka fikir waxaad qaban lahayd waqtiga firaaqada
Haddii aad guriga ka soo shaqeynayso, waxaad kuu furan khiyaarka goobta aad guriga kaga shaqeynayso, balse mar walba ka dheeraaw qolka jiifka sababtoo ah maskaxdaada ayaa waxa ay kuu shegaysaa in la joogo xilligii jiifka. “Ha u dhawan sariirta, ha ku fariisanin ama ha ku seexanin haddii aadan doonayn inaad seexato.”ayuu yiri Kevin
Tags: Shan Qodob oo Kaa Caawinaya Inaad Habeenkii Hesho Hurdo Fiican
Next post Walwalka Haweenka ku Dhacaa Ma Wuxuu Sababaa Hurda La'aan?
Previous post Qaadku Waxa uu Ka Baxaa Wadamo Badan oo Afrika ah